Maimbo rà ny tanàna !
Maimbo rà ny tanàna na ara-politika na ara-tsosialy satria savoritaka tsy hifankahitana no iainana amin’ny ankampobeny.
Ozona sa izina ?
« Kanjo vetivety ihany, mbola teny antsasa-dalana dia nanomboka nitaika ny erikerika mahalana.
Mba mila maka amin’izay e !
Nifarana tanteraka ny fiadiana izay ho tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja baolina kitra, saingy ho re hatrany ny akony ato ho ato.
Edito Trosa lovain-jafy
Nankalazaina nanomboka ny taona 2009 ary mandraka ankehitriny ny fampandrosoana lovain-jafy. Maro ireo atrikasa efa tontosa hahatongavana tamin’izany hatramin’ny taona 2015 saingy tsy hita ny vokany teto amin’ny firenena.
Hiala amin’ny laza maha fasana tetikasa, raha ho tafala amin’izany, izany dia hiditra amin’ny maha fasam-bovonana na fasam-bondrona sy fasam-pikambanana indray ity firenentsika ity raha izao no hitohy.
Ry mpandrora mitsilany isany…
Mihodina ihany ka mihodina saingy hatreto aloha dia ny eo ihany no eo. Tsy mivaha ny olana sendikaly, ny olan’ny mpampianatra sy mpanabe.
Ity izany no tonga amin�ilay fitenenana hoe �ny nantenain-kanirina indray no nampivandravandra�.
Raha nikabary tamin’ny frankofonia ny filoham-pirenena frantsay dia tsy nahalala afa-tsy ny tombontsoany sy ny mpiray tanindrazana aminy. Nanaovany tsindrim-peo mafy ny mikasika ny tokony hanamafisana ny fitandroana ny ain’ireo frantsay monina eto. Maro ireo nanantena fa mba hiresaka ny famerenana ireo nosy manodidina amintsika izy, kinanjo nanantena poakaty teo. Na dia ny niaiky ny helok’ireo frantsay tamin’ny 1947 aza izy dia tsy vitany akory ny niala tsiny tamin’iny. Ny nahafinaritra ny sofina mba nolazainy dia hoe be izahay no voasariky ny zavaboary sy toetr’andro aty aminareo. An-kilany, miteraka resabe hatramin’izao ny fanajan’ireo vahiny ilay fiantso antsika hoe “Malagasy” na dia nikabary tamin’ny teny frantsay aza ny kabarin’izy ireo. Ireo mpitondrantsika indray anefa no nanondrana tamin’ny fampiasana ilay fiantso manadrohadro “malgache”. Efa lasa ireo vahiny vao mitabataba fa tompon’ireo nosy manodidina. Nantenain-kanirina kanjo…